ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤဆောင်းပါးသည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါများကို ယေဘုယျသဘော အုပ်စုခွဲခြားပြသခြင်း အကြောင်း ဖြစ်သည်။ COVID-19 အတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါ ၂၀၁၉ ကို ကြည့်ပါ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (အင်္ဂလိပ်: coronavirus disease (or) COVID) ကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းရောဂါ ၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တုပ်ကွေး (သို့) အခြားပုံစံကွဲအမည်တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ခေါ်ဆိုကြ၍ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (CoV) မိသားစုဝင်များက ဖြစ်စေသောရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အောက်ပါရောဂါများကို ညွှန်းဆိုနိုင်သည်။
ပြင်းထန်အသက်ရှုလမ်းကြောင်းရောဂါ (ဆားစ်ရောဂါ - SARS) သည် ဆားစ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (SARS-CoV) ကဖြစ်စေသောရောဂါဖြစ်သည်။ ၂၀၀၂-၀၄၌ ဆားစ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု စတင်ခဲ့၏ ။
အရှေ့အလယ်ပိုင်း အသက်ရှုလမ်းကြောင်းရောဂါ (မားစ်ရောဂါ - MERS) သည် မားစ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (MERS-CoV) ကဖြစ်စေသောရောဂါဖြစ်သည်။ ၂၀၁၂-၁၄၌ မားစ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု စတင်ခဲ့၏ ။ ထိုအချိန်မှစတင်၍ မားစ်ရောဂါသည် အခါအားလျှော်စွာ ဖြစ်တတ်၏ ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါ ၂၀၁၉ (ကိုဗစ်-၁၉ - COVID-19) သည် ပြင်းထန်အသက်ရှုလမ်းကြောင်းရောဂါ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ၂ (SARS-CoV-2) ကဖြစ်စေသောရောဂါဖြစ်သည်။ ၂၀၁၉-၂၀ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားမှု စတင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ကူးစက်မြန်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကပ်ရောဂါဖြစ်၏ ။
လူတွင်ဖြစ်ပေါ်သော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးများ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ
ဆားစ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (SARS-CoV)
ပြင်းထန်အသက်ရှုလမ်းကြောင်းရောဂါ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ၂ (SARS-CoV-2)
ရောဂါ မားစ်ရောဂါ ဆားစ်ရောဂါ ကိုဗစ်-၁၉
ဖြစ်ပွားမှုများ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၅၊
၂၀၁၈ ၂၀၀၂-၂၀၀၄ ၂၀၁၉-၂၀၂၀
စတင်သည့် နေ့စွဲ ဇွန်
စတင်သည့် နေရာ ဂျက်ဒါးမြို့,
ပျမ်းမျှအသက် ၅၆ ၄၄[မှတ်စု ၁] ၅၆
ကျား/မ အချိုး 3.3:1 0.8:1 1.6:1
အတည်ပြုဖြစ်ပွားမှု ၂၄၉၄ ၈၀၉၆ ၉၈၁,၀၀၀ (၃-၃-၂၀၂၀)အထိ
သေဆုံးမှု ၈၅၈ ၇၇၄ ၅၀,၂၀၀ (၃-၃-၂၀၂၀)အထိ
သေဆုံးနှုန်း ၃၇% ၉.၂% ၃.၄%
အဖျား ၉၈% ၉၉–၁၀၀% ၈၇.၉%
ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း ၄၇% ၂၉–၇၅% ၆၇.၇%
အသက်ရှူခက်ခဲခြင်း ၇၂% ၄၀–၄၂% ၁၈.၆%
ဝမ်းလျှောခြင်း 26% ၂၀–၂၅% ၃.၇%
လည်ချောင်းနာခြင်း ၂၁% ၁၃–၂၅% ၁၃.၉%
အသက်ရှုကိရိယာ ထောက်ပံ့ရမှု ၂၄.၅% ၁၄–၂၀% ၄.၁%
↑ Based on data from Hong Kong.
↑ BBC News။ "Coronavirus officially named Covid-19, says WHO"၊ BBC၊ 11 February 2020။
↑ World Health Organization။ "COVID-19: New coronavirus given name by World Health Organization"၊ CanWest Global၊ Global News၊ 11 February 2020။
↑ "A novel coronavirus outbreak of global health concern" (February 2020). Lancet 395 (10223): 470–473. doi:10.1016/S0140-6736(20)30185-9. PMID 31986257.
↑ "A comparative epidemiologic analysis of SARS in Hong Kong, Beijing and Taiwan" (March 2010). BMC Infectious Diseases 10: 50. doi:10.1186/1471-2334-10-50. PMID 20205928.
↑ ၅.၀ ၅.၁ Old age, sepsis tied to poor COVID-19 outcomes, death။ CIDRAP, University of Minnesota။
↑ "Do men haveahigher case fatality rate of severe acute respiratory syndrome than women do?" (February 2004). American Journal of Epidemiology 159 (3): 229–31. doi:10.1093/aje/kwh056. PMID 14742282.
↑ ၇.၀ ၇.၁ Summary of probable SARS cases with onset of illness from 1 November 2002 to 31 July 2003။ World Health Organization (April 2004)။
↑ ၈.၀ ၈.၁ ၈.၂ ၈.၃ ၈.၄ Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)။ World Health Organization (February 2020)။
↑ "Middle East respiratory syndrome: what we learned from the 2015 outbreak in the Republic of Korea" (March 2018). The Korean Journal of Internal Medicine 33 (2): 233–246. doi:10.3904/kjim.2018.031. PMID 29506344.
↑ "Respiratory support for patients with COVID-19 infection" (March 2020). The Lancet. Respiratory Medicine. doi:10.1016/S2213-2600(20)30110-7. PMID 32145829.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်_ရောဂါ&oldid=508880" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂ ဧပြီ ၂၀၂၀၊ ၁၈:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။